Ruushka Oo Hakiyay Duullimaadyadii Masar Iyo Britain Oo Dalxiisayaasheeda Daadgureeneysa – Radio Muqdisho
Ruushka Oo Hakiyay Duullimaadyadii Masar Iyo Britain Oo Dalxiisayaasheeda Daadgureeneysa
M.weynaha Faransiiska Vladimir Putin ayaa hakiyey dhammaan duulimaadyadii ay diyaaradaha Xamuulka ee dalkiisa ku tagi lahaayee dalka Masar, ayada oo baarayaashu ay weli ku howlanyihiin hubinta in bam uu soo riday diyaaraddii Ruushka ee ku dhacday dalka Masar toddobaadkii la soo dhaafay iyo in kale.
Hoggaamiyaha Ruushka ayaa si deg deg ah u qaatay go’aankan kadib markii madaxa ciidamada ammaanka dalkaas ee FSB Alexander Bortnkov uu ku talo bixiyey in duulimaadyada la joojiyey inta laga go’aaminayo sababta rasmiga ah ee soo ridday diyaaradda dhacday sabtidii oo ay ku dhinteen 224 qof.
Russia ayaa horey ugu gacan seeray oo ay ku tilmaamtay warar aan jirin hadallo ka yimid madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo ra’iisul wasaaraha Britain David Cameron oo ahaa in kooxda Daacish ay bam saartay diyaaradda.
Afhayeen u hadlay aqalka looga arrimiyo Ruushka ee Kremlin-ka Dmitry Peskov ayaa sheegay in Putin uu ku amray dowladda inay ka shaqeyso sidii ay dalkooda ugu soo laaban lahayaeen dadka Ruushka ah ee weli dalxiiska u jooga badda cas.
Sidoo kale dowladda Pritain ayaa qaadatay go’aan ay ku soo daadgureeneyso dalxiisayaasheeda jooga dalka Masar, Iyadoo hadda la bilaabay diiwaan galinta dalxiisayaasha waddankaasi ku sugan.
Wasiirka amniga Galmudug oo tababar u soo xiray ciidamo booliis ah “Sawirro”
Taliyaha Ciidanka Booliska Oo Maanta Dib Ugu Soo Laabtay Dalka+Sawirro